အမျိုးသမီးများ အိမ်ထောင်ဘက်ရွေးမိပြီ ဆိုရင် ကြောက်စရာကောင်းသော ယောက်ျားများ… – Askstyle
အနည်းဆုံးမိန်းမနှစ်ယောက်မယူပါက ထောင်ဒဏ်ချမည်ဟု အစိုးရအမိန့် ထုတ်
အနည်းဆုံးမိန်းမနှစ်ယောက်မယူပါက ထောင်ဒဏ်ချမည်ဟု အစိုးရအမိန့် ထုတ် AP Bridegroom Milton Mbhele, with his four brides, from left Happiness,…
အသက် (၃၀)ပြည့်တော့မယ့်သူတွေဟာ ပိုက်ဆံနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာတွေ လုပ်ဆောင်သင့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေး…
❤အမှန်ခြစ်လေးနဲ့ √ LIke ဖြစ်ရင် ထပ်နှိပ်စရာမလိုတော့ဘူးနော်..❤ အသက် (၃၀)ပြည့်တော့မယ့်သူတွေဟာ ပိုက်ဆံနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာတွေ လုပ်ဆောင်သင့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေး... ငွေ၊ ပိုက်ဆံဆိုတာကတော့ အသက်အရွယ်တိုင်းအတွက် လိုအပ်တာပါပဲ။ ဒါပေမယ့်…
ငွေကြေးအတွက်စိတ်ပူနေရတာလား၊ ငွေကြေး လာဘ်လာဘတွေ ပိတ်ဆို့နေတာလား ယုံကြည်မှုနှင့် ရွတ်ဆိုသင့်သော အရဟံပဋ္ဌာန်း လာဘ်ပွင့်ဂါထာတော်
ငွေကြေးအတွက်စိတ်ပူနေရတာလား၊ ငွေကြေး လာဘ်လာဘတွေ ပိတ်ဆို့နေတာလား ယုံကြည်မှုနှင့် ရွတ်ဆိုသင့်သော အရဟံပဋ္ဌာန်း လာဘ်ပွင့်ဂါထာတော် အကြွေးဆပ်စရာရှိနေတာလား? အကြွေးတွေမရပဲဖြစ်နေတာလား? ငွေကြေး လာဘ်လာဘတွေ ပိတ်ဆို့နေတာလား? ငွေကြေးအတွက်စိတ်ပူနေရတာလား? သောကများနေရတာလား?…